सहयोगी नभएकोले आफै कुट्न बाध्य भएँ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपाल देखी कुवेतसम्म
आमा र बच्चाको धड्कन एक साथ धड्कने →
मलाई हात हाल्न खोजे, त्यसैले कुट्न बाध्य भएँ, मोटो छानेको त होइन, एउटा गाउँको नेता जस्तो थियो, त्यसलाई चाहिँ अलि बढी नै पिटेको हुँ, धर्मको पनि एउटा कानुन हुन्छ, धर्म बिगार्न खोजेकोले पिटेको हुँ, संसारलाई किन ढाँट्ने ? तर तपाईंहरूले पनि बुझ्नुपर्‍यो, म के का लागि तपस्या गर्दै छु भन्ने,
तपस्वीजस्तो मान्छे पनि तारेख धाउँछ र ?
नयाँ पत्रिका, हलखोरिया (बारा), १० साउन
साग खोज्न गएका बारा मनहर्वाका १७ सर्वसाधारणलाई २४ घन्टासम्म बन्दी बनाएर कुटी घाइते बनाउने तपस्वी रामबहादुर बम्जन पत्रकारमाझ उपस्थित भएका छन्　। उनले आफूविरुद्ध उजुरी परे पनि प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर तारेख नधाउने बताएका छन्　। पीडितको उजुरीपछि कारबाही अघि बढाउन आइतबार तपस्यास्थल हलखोरिया पुगेका जिल्ला प्रहरीको टोली र पत्रकारमाझ बम्जनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्　। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत रुद्रकान्त झा, निजगढका प्रहरी निरीक्षक भेषराज रिजालसहित दुई दर्जनभन्दा बढी प्रहरीसहितको टोली तपस्यास्थल पुगेर तपस्वीलाई सोधपुछ गरेको थियो　। पीडितले जैतापुर प्रहरी चौकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तपस्वीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएपछि प्रहरीले कारबाहि अघि बढाएको हो　। सोधपुछकै क्रममा तपस्वीले आफू अन्यायमा परेको र धर्मभित्र पनि कानुन हुने हुदा उनीहरूलाई सामान्य सजाय दिएर छाडेको बताए　। गत बिहीबार जंगली साग खोज्न गएका मनहर्बा गाविसका १७ सर्वसाधारणलाई २४ घन्टा नियन्त्रणमा राखी तपस्वीले सख्त घाइते बनाई कुटपिट गरी छाडेका थिए　। ‘म तपस्या गरेको स्थलमा आई चुरोट, बिंडी पिएर होहल्ला गरेपछि मेरो ध्यान भंग भयो, सम्झाउँदा नमानेपछि सबैलाई गोदेको हुँ,’ सोधपुछका क्रमममा बम्जनले भने　। बम्जनले आफूलाई कारबाही गर्न खोजेर प्रहरी र पत्रकारले धर्मको उल्लंघन गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए　।
तपाइं लिटिल बुद्ध, शान्तिको दूत । तर, आफैं गाउँलेलाई कुटपिट किन गर्नुभयो ?
म ध्यान गरिरहेको समयमा उनीहरू आएर डिस्टर्ब गरे । हात हाल्न खोजे । कुट्न बाध्य भएँ ।
तपाईं उनीहरूलाई चिन्नुहुन्थ्यो ?
चिन्दिनँ । नचिनेका मान्छे हुन् सबै ।
बन्चरोको पासोले पो हान्नुभएछ नि ?
हातले पिटेको हुँ, बन्चरोको पासोले होइन । गाउँलेले बोलेका सबै कुरा झुटा हुन् । दुई-तीन झापड भने लगाएको हुँ ।
गाउँलेको त टाउको फुटेको छ त, हातैले झापड लगाउँदा टाउको फुट्छ र ?
म माथि आक्रमण गर्न खोजे उनीहरूले, अनि ’twas । हल्ला गर्ने, चुरोट खाने गरे पनि सहेर बसेँ । मेरो आसनमा आएर मजस्तै बसेर ध्यान गर्न खोजे । अति भएपछि कुटेको हुँ ।
तपाईंले त बन्दी बनाएर पिट्नुभएको भन्ने छ नि ?
बन्दी बनाएर कुटेको होइन । तल ध्यानस्थलमै पिटेँ । माथि घरमा ल्याएर पिटेको होइन ।
तपाईंजस्तो तपस्वीले यसरी पिट्न मिल्छ ?
उनीहरू आक्रामक रूपले आएपछि कुटपिट गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो ।
कति समय कुट्नुभयो ?
२४ घन्टासम्म कुटेको भन्ने आरोप छ । तर, पाँच मिनेट मात्र कुटेको हुँ ।
मोटो मान्छेलाई छानेर अलि बढी पिट्नुभयो रे, मोटामाथि थप रिस किन नि ?
मोटो छानेर होइन, एउटा गाउँको नेताजस्तो थियो । त्यसलाई चाहिँ अलि बढी नै पिटेको हुँ ।
तपाईंले तपस्या गर्नुभयो भन्दैमा गाउँलेले जंगलमा गएर स्याउला पनि टिप्न नपाउने ? गाउँलेको अधिकारमाथि तपाइंलाई रिस किन ?
घाँस र सागपात जहाँबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । तर, उनीहरू मै भएको ठाउँमा आए । सागपात टिप्न मात्र आएका होइनन् उनीहरू । मेरो ध्यान भंग गर्न पनि आएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपस्वीजस्तो मान्छे दुई-चार शब्द सम्झाएर पठाएको भए पनि हुन्थ्यो नि ?
मैले सम्झाउन खोजेको हुँ । सम्झेनन् । अनि पिटेँ ।
तपाईंले त बीचबीचमा थकाइ मार्दै पिट्नुभयो रे नि ?
चौबीसै घन्टा ध्यान गर्ने मान्छे कसरी थाक्छ ? त्यति थाक्नेगरी पिटेको पनि छैन ।
गढीमाईमा किन बोका चढाएको भनेर पनि सोध्नुभयो रे ?
मैले गढीमाईको कुरा गरेकै थिइनँ ।
तपाईं अहिले त ध्यानमा हुनुहुन्न त ?
म सबै दिन ध्यानमा छु । तर दिनमा एकपटकचाहिँ घरमा आउने गरेको छु ।
तपाईंविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ । अब के गर्नुहुन्छ ?
धर्मको पनि एउटा कानुन हुन्छ । धर्म बिगार्न खोजेकोले पिटेको हुँ । संसारलाई किन ढाँट्ने ? तर तपाईंहरूले पनि बुझ्नुपर्‍यो, म केका लागि तपस्या गर्दै छु भन्ने ।
तपाईं अरूका लागि धर्म गर्ने, शान्तिको सन्देश दिने तपस्वीलाई रिसचाहिँ किन उठ्यो ?
हामीलाई रिस उठ्दैन । हामी त हाँसी-हाँसी सबै काम गर्छौं । ममा रिस भएको भए तपाईंसँग यति लामो कुरा गर्ने थिइनँ ।
अप्ठ्यारो परेको भए सहयोगीलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो, आफैं अघि सरेर किन कुट्नुभयो ?
सहयोगीहरू नभएको अवस्थामा म आफैंले पिट्नुपर्‍यो ।
सर्वसाधारणलाई स्याउला पनि टिप्न नदिने, तपाईं आफूचाहिँ यत्रो वन घेरेर किन बसेको ?
जगत् र प्राणीको संरक्षणका लागि वन रोकेको हुँ ।
शान्तिको खोजीमा बसेका मान्छेले त सहेर बसेको भए हुन्थ्यो नि ?
मैले घरबाट थुतेर पिटेको होइन । सुरक्षाका लागि पिट्नुपर्‍यो ।
कुट्नुभयो, अब तपाईंमाथि कारबाही होला, होइन ?
उनीहरू आक्रामक शैलीमा आए । म तपस्यामा थिएँ । अब कारबाही कसलाई गर्ने, मलाई कि उनीहरूलाई ?
तपाईंले त पहिला पनि यस्तो गर्नुभएको हो नि ?
होइन, पहिलोपटक पिटेको हुँ । यसअघि छैन ।
अब त तारेख धाउनुपर्छ । ध्यान गर्नुहुन्छ कि धाउनुहुन्छ ?
(हाँसेर) तपस्वीजस्तो मान्छे पनि तारेख धाउँछ ?
This entry was posted in अन्तर्वार्ता, समाचार. Bookmark the permalink.